Dherkeenley oo billaawday baacsiga [Ciyaar Weerada] | KEYDMEDIA ENGLISH
Dherkeenley oo billaawday baacsiga [Ciyaar Weerada]
Booliiska Degmada Dharkeenley ayaa sheegay in gacan adag lagu heynayo kooxaha gacantooda soo galay oo ku eedeysay intooda badan dambiyo kala duwan oo horay looga diiwaangeliyay sida hadalka loo dhigay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Tan iyo Bilowgii bishaan Ramadaan, Ciidanka Amniga degmada Dherkeenley ee Gobolka Banaadir, ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan dhallinyaro hoy iyo harsi u diiday dadka, kuwaas oo falal amni darro ka waday xaafadaha degmooyinka Dherkeenley iyo Wadajir.
Taliska Booliiska Degmada Dharkeenley, ayaa saxaafadda u sheegay in ay gacanta ku hayaan, dhallinyaradii furaha u ahayd dhibaateynta shacabka degmada, kuwaas oo abaabuli jiray [Ciyaal weero], aan nixin oo dil, dhac iyo kufsiba ka geystay qaar ka mid ah xaafadaha, taasoo sababtay qax iyo cabsi xooggan.
Guddoomiyaha degmada, Guddoomiye ku xigeynka Amniga iyo Siyaasadda iyo Taliyaha Booliska ee degamda, oo dhamaantood saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in kooxaha gacanta lagu soo dhigay, laga raad raacay muuqaallo iyo sawirro baraha bulshada lagu baahiyay, looguna galay guryaha iyo goobaha waxbarashada.
Waxa ay sheegeen in ay ku raad-joogaan qaar kamid ah hoggaanka dhalinyarada abaabulan si loo soo afjaro dhibaatooyinka ay ka geysanayaan degmada iyo midda ay iyagu isku geysanayaan, waxayna waalidiinta ugu baaqeen in ay ka warqabaan howlaha ay qabtaan carruurtooda, ka hor inta aysan galin gacanya laamaha amniga.
Degmooyinka Dherkeenley, Wadajir, Hodan, Yaaqshiid iyo Kaaraan, ayaa si weyn looga soo wariyay kooxahaan ku hubeysan middiyaha Baangadaha iyo Budadka ee diyaarka u ah in ay galaan danbi kasta oo dhaca, kufsiga iyo dilku ugu horreyaan, taasoo abuurtay cabsi weyn oo soo wajahaday shacabka gaar ahaan haweenka.
Dhawaan Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha, Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen [Odawaa], ayaa shaaciyey inay jiraan degmooyinka tirsan caasimadda oo qoysaska ku nool ay u dacwoodeen kooxda Al-Shabaab, si looga ilaaliyo kooxhaan buracadda ah, hayeeshee, maamulka Dherkeenlay ayaa qaaday tallaabadii koobaad.
Si guud amniga Caasimadda ayaa si weyn u liita, waxaana la rumeysan yahay in maamulka ugu sarreeya Gobolka Banaadir, uu si weyn ugu milmay uguna mashquulay arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka, taasoo meesha ka saartay howlihii loo igmaday ee ilaalinta badqabka shacabka, iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan.